Zvakanakisa Brokers Options Kutengesa Forex
Ndiani Anodzora Sarudzo
Sarudzo Kutengesa Chigadziko
uori hukuru hunoitwa nevezvoutano
Robhoti & Signal
Kunzwisisa Brokers Sarudzo Kutengesa Forex
Forex uye Binary Options
Tikugashirei kune trader Binary, yakakosha sosi yeruzivo, mazano uye yekudzidza kwevatengesi vatsva kana vane ruzivo tarisa kuti uwane zvimwe pamusoro pema binary sarudzo, Forex Ukutengesa uye Cryptocurrency. Pa webhusaiti yedu iwe unenge uine mukana wekusingaperi kune zvinotevera:
• Ruzivo rwechokwadi pamhando dzesarudzo, kutengesa psychology uye kuenzanisa kwemutengo
• Rubatsiro rwechirongwa - manejimendi emari, mhando dzehunyanzvi, uye ongororo yehunyanzvi
• Ongororo dzeBroker - ruzivo rwakajeka pane vatenzi vekumusoro vakavimbika kubhuroka
• Scams - zano pakutsvaga zvinogona scams
• Demo account - wongororo pane dzakasiyana demo account
• Zviratidzo - ruzivo rwakakosha pane rakasiyana rezvikwangwani zvakasiyana
• Sarudzo bhurogu - simuka kusvika padhuze needu nyowani post pamusoro peSarudzo kutengeserana
Binary Options Kutengesa uye technical Analysis
Kana kutengesa mune zvingasarudzika zvokusarudza, imwe inofanirwa kufungidzira iyo nzira iyo mutengo weasset unofamba, uchireva mutengo wekurova, pakupera ...
Trend Lines - Chishandiso Chombo muBhinary Options Trade
Binary sarudzo dziri kukura mukuzivikanwa nevatengi vepasi rese nevhu zviri nyore maitiro uye akawanda mikana. Nekudaro, sekusarudzika kwekusarudza kunoda kuti munhu afungidzire remangwana maitiro easset ...
Imwe Misa Resource Yesarudzo Kutengesa
Kunyangwe iwe uchitsvaga zano rekuvandudza zano kana kuti unoda kuyambuka ongororo pamusoro pevatengesi vepamusoro, webhusaiti yedu inopa vatengesi vatsva vane ruzivo neruzivo rwakakosha.
24 / 7 kutengesa
$ 1 kushoma kutengesa huwandu
Yemahara Demo Akaunti
Mahara emadhora 20 Bhonasi
Shanyira Iye Zvino
Bunary yanga ichipa mabasa ekutengesa pamhepo kubva 1999. Kwemakore anopfuura mana, isu tave tichienderera mberi mukukudziridza nzvimbo yedu yekutengesa yepasi rose, tichiita zvese zvatinogona kuti kuita kutengeserana kugadzikane uye kukubatsire.
Forex ndiyo yekudyidzana yekudyidzana musika umo mari inotengeswa kutarisana nemumwe nepaviri. Musika wekushambadzira wekunze unosanganisira mari kubva kune imwe nyika, yakatengeswa maawa e24 pazuva, Muvhuro kusvika Mugovera.
Nyevero Arrow Binary Options Ssrc Hapana Anowirirana
Forex Turbo Zviratidziro uye Yekutengesa System
Forex kutengeserana inoshanda nekutenga imwe mari vachipesana neimwe mari. Mari yacho inogara iri vaviri vaviri nemari yekutanga mumaviri (iyo iri kuruboshwe) inonzi iyo 'base' mari, nepo imwe mari mune vaviri (kurudyi) inonzi iyo 'counter' mari.
Muenzaniso: EUR / USD - iyo EUR (Euro) ndiyo yekutanga mari uye iyo USD (US Dollar) imari yekudyidzana.
Pundutso (kana kurasikirwa) inoitwa neimwe mari kukoshesa kana kuderera pane imwe mari mune yekubhadhara mari.
Iwe unotenga joera yemari kana iwe uchitenda kuti base base rinosimbisa kuchirwa nemari inokwikwidzana. Iwe unotengesa joera yemari kana iwe uchitenda kuti base base rinogona kupera simba pakatarisana nekambani yemari.
Pundutso inoyerwa muPips - Maperesenti muPoint. Anenge ese maviri emari pairi anonongedzwa kunzvimbo dze5 yedhisheni neshanduko munzvimbo yekupedzisira nzvimbo - inonzi "pombi '. Semuenzaniso, iyo EUR / USD inokosheswa pa1.3542 - iyo 2 pakupedzisira iri pombi. Kana iyo mutengo weEUR / USD wakakwira kune 1.3544, ipapo iyo EUR / USD inonzi yakakwira 2 pips.
Kana uchitenga kana kutengesa mari pane panogara paine kopi mbiri yemutengo - Mutengo wekubhadhara uye mutengo wekubvunza. Musiyano uripo pakati pemitengo unonzi kupararira. Mari yekutenga inomiririra mutengo wepamusoro uyo mutengi anoda kubhadhara kuti awane mari, nepo mutengo wekubvunza uchimiririra mutengo wakaderera uyo mutengesi waanoda kugamuchira nemari yacho.
Forex anotengesa anosanganisirwa, mune iyo Forex broker, inowanikwa ye 100: 1 inopihwa. Izvi zvinoreva kuti kutengeserana kwese kunokudzwa ne100 nguva, zvichiita kuti purofiti yakakwira sezvo mutengesi achikwanisa kuwedzera huwandu huri kutengwa.
Forex Robhoti yeKukwikwidzana Kwekutengesa Chiitiko
Kana iwe uri mutengesi anoshuva kutengesa uchishandisa iyo Forex marobhoti sezvaunofunga kuti ivo vanogona kuita zviri nani kupfuura iwe, hausi wega unofunga kudaro. Nekuti Forex kutengesa inokonzerwa nemanzwiro uye manzwiro emutengesi wega, yakawanda nguva nguva zvisarudzo zvinowanzokundikana. Izvi hazvisi izvo zvaunoda kana kutengeserana mari vaviri vaviri; saka, iwe unoda Forex marobhoti.Hazvina basa kutaura kuti Forex robhoti yakazvimiririra kombiyuta software iyo iri chaizvo inotengeswa kune vatengesi vane zvishoma kana vasina ruzivo rwezvakaoma Forex kutengesa musika algorithms. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ivo vatengesi vanoreva kuti purofiti inogona kuwanikwa kunyange iwe usipo pamberi pePC yako; zvisinei, iwe unofanirwa kubva kurudyi sangano.
Ita shuwa kuti ivo chaizvo izvo zvavari vatengeswa kunze kuve nekuti kana ukatadza kusarudza iyo chaiyo Forex robhoti, mikana ndewe ungatadza kuita purofiti. Saka, sarudza iyo Forex marobhoti kubva kune jungle revatambi. Sezvo paine zviuru zve Forex kutengesa marobhoti pamusika, iwe unofanirwa kunzwa kufara nezve sarudzo dzauinadzo.
Iwo ma Forex marobhoti ayo anoti akambosangana nematanho ekuwongorora akawanda akaburitsa zvigadzirwa zvinogutsa saka ivo vari kutengeswa sevanoshanda zvakanyanya mukugadzira purofiti inowirirana inogona kuvimbwa. Nekudaro, izvo zviri epamusoro Forex marobhoti inofanirwa kusarudzwa newe mushure mekuwongorora kwakawanda uye kuyedzwa kweanove maverengeki ekupa masevhisi.
Yakavimbika Forex Robots
Semuenzaniso, mhinduro ye top Forex robhoti haisi iyo yakatwasuka-mberi; zvisinei, iyo inonyanya kukosha yekufunga pano inofanirwa kunge iri iwo musiyano mukuru pakati pegwaro rinopindirana nemaitiro emagetsi ekutengesa. Zvakangodaro, iyo inonyanya kukoshesa sarudzo ndeayo, yeamateur Forex mutengesi, ndeyokutengesa nemotokari zvinoratidzira Forex marobhoti.
Inotaridzika sevatengesi vazhinji vanga vachiwana mari kubva mukutengesa vachishandisa izvo zvechinyakare zvisingatenderane ne Forex marobhoti; zvisinei, kana uchisarudza yepamusoro Forex marobhoti ekushandisa kwako, ita shuwa kuti une chaicho sosi yeruzivo. Semuenzaniso, traderBinary inobatsira iwe kusarudza iyo yakakodzera Forex robhoti uye pakupedzisira inobatsira iwe kuva nyanzvi yekutengesa.
Zvichida ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekuongorora kuti ndeapi ari pamusoro marobhoti e Forex kushanyira uye kunyorera kumawebhusaiti ane mukurumbira uko marobhoti epamusoro e Forex anoongororwa. TraderBinary imwe saiti yakadaro iyo inokupa iwe wakadzama ruzivo nezve yepamusoro yepamusoro inopa uye mhinduro zvakare.
Basic Strategies Binary Options
Binary Options - Kutengesa Goridhe
Pakati pezvakawanda zvakasiyana marudzi emakambani anosanganisirwa sepasi panowanikwa musika wemasarudzo esarudzo, imwe yeanowanzo kutengeswa igoridhe. Vazhinji vatengesi vanowana zvakanyanya ...
Binary sarudzo dzinounza kune vatengesi vayo akasiyana emari nzira dzakasiyana yekutengeserana nayo sepasi pefuma zvinhu. Chinyorwa chinotevera chinokurukura nzira dzakapusa dzekutengesa muEUR / USD ....
Binary Options Range Kutengesa Isu
Binary sarudzo dzinogona kugadziriswa nemakumi ezviuru maitiro akasiyana zvichienderana nerudzi rwechirongwa chaunoronga kuita. Chinyorwa chinotevera chinotsanangura zvakasarudzika iyo IN / OUT yekutengesa nzira ...
Chii Chinonzi Midziyo?
Mumashoko akareruka, zvigadzirwa ndizvo zvigadzirwa zvinoshandiswa kubatsira muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Isu tinoshandisa simba kuiraramisa, simbi kuenda
Vakai zvombo nezvishandiso, uye zvigadzirwa zvekurima zvekudya. Aya - simba, simbi, uye zvigadzirwa zvekurima - ndiwo matatu makosi emidziyo, uye ndiwo akakosha kuvaka zvivakwa zvehupfumi hwenyika.
Makambani akawanda anosangana nezvinotevera:
Kutengesa: Zvinoreva kuti panofanirwa kuve nemota inoshanda yekudyara kuti ikubatsire kuitise. Semuenzaniso, zvigadzirwa zvinosanganisirwa kana iine chibvumirano chemangwana chakapihwa icho pane imwe yekutsinhana kukuru, kana kambani ikachigadzirisa, kana paine homwe yemari inotengeswa sematanda pamari inotsinhana.
Uranium, rinova rakakosha simba chinokosha, haitevedzerwe chibvumirano chemangwana, asi makambani akati wandei anoshanda mumigodhi nekugadzirisa iyi mineral. Nekudyara mumakambani aya, iwe unowana mukana kune uranium.
Kununurwa: Oiri isina kuchena inosanganisirwa nekuti inogona kuendeswa mumabhomba, uye gorosi inosanganisirwa nekuti inogona kuunzwa neyebushel.
Liquidity: Yese yekutengesa inofanirwa kunge iine musika unoshanda nevatengi uye vatengesi vanogara vachichinjanisa neumwe. Liquidity yakakosha nekuti inokupa iwe sarudzo yekupinda uye kubuda mune yekudyara isina kusangana nekunetseka kwekuyedza kutsvaga mutengi kana mutengesi kune ako akachengeteka.
Njodzi neKudyara mari muMakambani
Kuisa mari pane zvese zvekugadzirisa njodzi inosanganisirwa nekugadzira kudzoka. Heano mamwe eanowanzoitika njodzi aunosangana nawo paunodyara mune zvigadzirwa uye mamwe matanho madiki aunotora kuti uderedze njodzi idzi.
Geopolitical njodzi nemidziyo investments
Imwe yengozi yezvinhu zvinowanikwa pasi rose ndeyekuti zvisikwa zvepasirese zviri munzvimbo dzakasiyana siyana uye kutonga pamusoro pezvinhu izvi zvakarara nehurumende, makambani epasi rese, uye mamwe masangano. Semuenzaniso, kuti uwane iyo yakakura deposits yemafuta ari munzvimbo yePersian Gulf, makambani emafuta anofanirwa kubata nenyika dzakazvimirira dzeMiddle East dzine simba pamusoro peiri oiri.
Kusawirirana kwenyika dzakawanda pamusoro pekudzora kwezvinhu zvakasikwa zvakajairika. Dzimwe nguva nyika yekutambira inongodzinga makambani ekunze anobatanidzwa
Kugadzirwa uye kugovera zviwanikwa zvakasikwa.
Saka ungazvidzivirira sei kubva pane izvi kusagadzikana? Imwe nzira ndeyekudyara mumakambani ane ruzivo uye hupfumi hwechiyero. Semuenzaniso, kana iwe uchifarira kuisa mari mukambani yemafuta yepasi rese, enda neye ine yakatarwa rekodhi rekodhi.
Ingozi yekufungidzira nezvikoshwa
Misika yezvigadzirwa, sekufanana nemabond kana masheya emisika, inogariswa nevatengesi avo vanonyanya kufarira kuita mupfupi munguva yekufungidzira kana mutengo wekuchengetedza uchakwira kana kuburuka.
Kana iwe uchitengesa zvigadzirwa, gara uchiongorora misika, uchitsvaga zvakawandisa zvaunogona nezvekuti vatori vechikamu pamusika ndiani uye kuti iwe ugone kusiyanisa pakati pevashandisi vekutengesa nevanofungidzira.
Imwe sosi iwe yaunogona kutarisa ndeye Kuzvipira kweVatengesi mushumo, iyo yakaiswa kunze ne Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Forex Brokers Ongororo
Kutengeserana kwe Forex kune hukuru hwakanyanya uye hunofunga kuti mumwe haafanire kunetseka zvakanyanya nezve nuances inoita iyi fomu yekutengesa. Chokwadi ...
Unhu hunokosha hwekucherechedza kana uchisima mari mu Forex
Musika we Forex unosanganisira hukuru hwemari inoshandiswa pasi rese, uye zvakakosha kuti vatengesi vazvichengete vakagadziriswa nezvezvinoitika zvinoenderana nemusika. Zisarudzo zvinobudirira mu Forex ...
Mahara emadhora 20 Bhonasi ongorora kushanya
✅ 100% Deposit Bonus ongorora kushanya
✅ 50% Deposit Bonus ongorora kushanya
General Njodzi Njodzi: Kutengesa Binary Options inotakura yakakwira njodzi uye inogona kuguma nekurasikirwa kwako kwekudyara. Nekudaro, Binary Options inogona kunge isina kukukodzera. Iwe haufanire kudyara mari yausingakwanise kurasikirwa nayo. Usati wafunga kutengesa, iwe unofanirwa kufunga nezve yako chinangwa chekudyara, huwandu hwe ruzivo uye kushivirira kwengozi. Mumamiriro ezvinhu chero api zvawo tichava nemhosva kune chero munhu kana sangano re (a) chero kurasikirwa kana kukuvara zvachose kana chikamu chinokonzerwa, kunobva, kana kune chekuita nekutengeserana chero kwakabatana neBintern Options kana (b) chero chakananga, chisina kunanga, chakakosha , zvinokonzeresa kana kuitika zvinokuvadza chero.
REMAHARA DEMO ACCOUNT $ 10.000